Soo iibsiga ESHOT ee Iibsashada Xayeysiinta Basaska | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirSoo iibsiga ESHOT ee Iibsashada Xayeysiinta ee Basaska
24 / 01 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
eshot ayaa ku tartamaya xayeysiinta basaska
Agaasinka Guud ee Degmooyinka Izmir ESHOT Agaasimaha Guud wuxuu amar ku siinayaa xuquuqda loo adeegsado basaska, joogsiga iyo xarumaha wareejinta ujeedooyinka xayeysiinta muddo shan sano ah. Hindisada waxaa si toos ah looga daawan karaa websaydhka ESHOT.
Agaasinka Guud ee ESHOT wuxuu u tartamayaa xuquuqda loo leeyahay 4 998 joogsiga baska iyo 900 bas oo shan sano ah. Qandaraaska loogu talagalay xayeysiinta waxaa lagu qaban doonaa Arbacada, 5-ta Febraayo saacadu markay tahay 14.30:XNUMX dhismaha xarunta.
Shirkadda, oo ku guulaysatay qandaraaska, waxay dejin doontaa nidaam rakaab rakaab ah oo wadar ahaan dhan 1820 maqal iyo muuqaallo ah oo aaladaha macluumaadka basaska ah, joogsiyada iyo xarumaha wareejinta.
Qiimaha lagu qiyaasay ayaa ka badan 48 milyan
Sida ku xusan qodobka 2886-a ee Sharciga Wax Soo Saarka Gobolka ee lambarkiisu yahay 35, qiyaasta qiimaha qandaraaska lagu qaban doono iyada oo la raacayo nidaamka iibinta waxaa lagu tiriyay 48 milyan 274 kun 440 TL marka laga reebo VAT. Lacagta dhigaalka ah ee ku meel gaarka ah waxaa lagu go'aamiyay 1 milyan 448 kun 233 TL.
Dukumintiga, oo ka kooban macluumaad ku saabsan shuruudaha ka qeybgalka qandaraaska, waxaa si bilaash ah looga daawan karaa waaxda Iibsiga Guud ee ESHOT. Dhab ahaantii ama shakhsiyaadka sharciga ah ee raba inay ka qaybqaataan qandaraaska ayaa u baahan inay helaan dukumiinti la oggolaaday oo ah ESHOT oo loogu talagalay dalabka 2 TL.
Xilliga Kama Dambeysta ee 5-ta Febraayo
Waqtiga kama dambeysta ah ee soo gudbinta dalabyada ayaa la shaaciyey sida Arbacada, Febraayo 5 saacadda 14.30:XNUMX. Soo-jeedinta waa in loo gudbiyaa xafiiska Tifatiraha Adeegyada Taageeraha Agaasinka Guud ee ESHOT illaa iyo maanta.
Waxaa laga daawan karaa internetka
Hindisada, oo sidoo kale lagu daawan karo tooska ah shabakadda ESHOT, ayaa lagu qaban doonaa Arbacada, Feebarwari 5-ta saacadu markay tahay 14.30:XNUMX hoolka Shirka Golaha Deegaanka ee ESHOT.
Dhammaan hindisooyinka ESHOT si toos ah ayaa loogu baahin doonaa
Iyada oo la raacayo mabda'a daah furnaanta, Agaasinka Guud ee ESHOT wuxuu go'aansaday inuu daabaco hindisooyinka oo dhan hadda laga bilaabo. Iyada oo ku eg baaxadda barnaamijka qandaraaska lagu shaaciyey websaydhka rasmiga ah ee ESHOT, xaraashyada la imanaya maalinta iyo waqtiga ayaa la socon kara iyada oo toos looga baahin karo goobta.
Dadka naafada ah ee kursiga curyaanka
Ma jirto wax xiiso leh oo ku saabsan rukumada giraanta si ay u quudiyaan Nidaamka Tareenka fudud ee Samsun
Sanduuqa madow ee imanaya basaska
Karakutu Booqashooyinka Basaska
Gaadiidka gaadiidka baaskiilka ee basaska ee magaalada Bursa
Sannadka Cusub ee Gaadiidka iyo Baska ee Kocaeli
Codsiga raajada qasabka ah waxaa laga saaray basaska
Kormeerka Jiilaalka ee Basaska Kocaeli
Xeerarka KPSS ee Basaska Kocaeli
Liisanka baabuurta ayaa sii adkaanaya
Tikandhada tigidhka ee TCDD Helitaanka fududeynta
TCDD waxay qorsheyneysaa inay iibsato 6 tareen oo dheeri ah qadka Ankara-Konya YHT bishan.